Home Wararka Habdhaqanka Rooble, Deni Ma Dareensan yahay Misa waa la qabaa?
Habdhaqanka Rooble, Deni Ma Dareensan yahay Misa waa la qabaa?
Waxaa markale Muqdisho ku soo noqday ismaandhaaf kadib markii uu shaki ku yimid habsami u qabsoomidda doorashada. Cidkasta oo caqli leh waa garan kartaa in khalad iyo haragdaamo cusub oo soo korortay uu ahaa habraaca ay wada saxeexeen Golaha ay ku mideysan yihiin Madaxweynayaasha DG iyo RW Rooble, marqaatina uu ka yahay Gudoomiyaha Gobolka Banaadir.
Isdiidka waxaa ka dhasahy kadib markii habraaca laga dhex helay qodobo lagu dhex duugay oo uu muuqda inay dan gaar ahi ka dambeyso.
Xulista ergooyinka doorashada iyo kooramka.
Amniga doorashada iyo kaalinta sirdoonka maamul goboleedyada.
Maamulka dhaqaalaha doorashada.
Kaalinta guddiga doorashada heer Federaal.
Awoodda la siiyay madaxda maamul goboleedyada.
Aragtida Midowga Musharrixiinta oo markii hore dhinac la iska dhigay.
Waxay u eg tahay in la abuuray habraac keeni kara kala shaki iyo inay dhacaan ismaandhaafyo laga dhaxli karo :
Inay doorashada dib uga dhacdo xelliga la filayo inay ku qabsoonto markii seddexaad.
In dib u dhacaas uu keeno in markale dalka uu khater galo oo ay timaado inay loo baahdo inay dib ugu soo noqdaa Caasimadda ciidankii Badbaado Qaran oo mahad weyn looga hayo inay ka mas’uul yihiin inay halkaan la yimaado oo doorasho laga hadlaba.
Xogo Xamar la isku dhaafsanayo ayaa sheegaya in waxa dhacay ay yihiin hawl loo hoosgeliyey Siciid Deni loona dhiibay inuu fuliyo isagana uu la orday isagoon iska fiirin inay tahay ku haboon tahay.
Dad badani waxay is weydiinayaan halka ay wax iska weydaarsan yihiin maadaama ilaa hadda RW Rooble lagu qabay kalsooni weyn, isagana uu u muuqday qof ilaalinaya kalsoonidii lagu qabay, hasa yeehsee uu hadda weji kale yeeshay. Waxaa la isla dhex marayaa in Isbadalka RW Rooble uu ka yimid kadib markii uu safarro naashnaash ah uu dibadda ku tagay soona arkay waxa ay tahay haybadda madaxnimo iyo sharata la huwiyo qofka marka uu qaran matalayo. Dadka qaar ayaa qaba in RW Rooble uu rabo inuu wax ka badalo haddalladii uu ku celcelinayey ee ahaa “Anigu murashax maahi 2021, waxaan sugayaa 2025, waxaana rabaa in Doorashadaan ay caddaallad ku dhacdo” Laakiin waxaa ka muuqata in Siciid Deni loo dhiibay hawl ah in Dowlad Goboleed soo saaran dadka liiskooda uu Xamar ka qori doono Fahad Yasiin, si odayga aamusan ee Farmajo aanu xil wareejin u sameyn.
Haddaba Rooble waxaa la leeyahay:
Waxaa heshiis hoose la galay Fahad iyo Farmajo, isagana waxaa heshiis dedban la galay Siciid Deni oo waxay ku heshiiyeen in loo dhiibo Deni habraaca laga sameeyey Villa Somaliya oo uu ka iibiyo Madaxda dowlad Goboleedyada oo u badan kuwa iska haye raac ah marka laga reebo Madoobe isaga dantiisa dabajooga.
In RW Rooble weli yahay qof u shaqeynaya Farmajo iyo Fahad midowga murashaxiinatana u been guuro oo markasta oo ay wax diidaan lala fadhiisto loona sheego inuu yahay wiilkooda u maqan.
Waxaa iyana jirta aragti kale oo leh In Rooble rabo inay doorashada Fashilanto oo uu dalka sii hayo muddo kale isaga oo beesha caalamka u kaashanaya in la siiyo laba sano oo KMG ah oo uu ku qabto doorasho qof iyo cod ah, taan oo ay beesha Caalamka aad u rabaan si dalkan loogu helo Madaxweyne Kaliteliye shrciyeysan noqon kara sida Ugandha, Jibuuti, ama Rwanda oo ku jooga labaatameeya sano doorashada la yiraahdo qof iyo cod.
Dunida ayaa ka soo xiisa dhaceysa waddamada aan hawshooda qabsan Karin oo aan wax la cuni Karin, waxaana marqaati nool kuu ah caawa dalka Afganistaan oo uu Marayekanka ku bixiyey $2.2 Trilyan inay iskaga tageen, Somaliya oo lagu bixiyey $36 Bilyan waa laga dhaqaaqi karaa.
Isku soo duub dadka Somaliyeed waxaa la gudboon inay tashadaan oo ay iska qabtaan kuwa noloshooda khater gelinaya oo jid u xaaraya inay dalka ka dhacaan dagaallo kale oo lagu hoobto. Boobka awoodda soo xulista, soo barista, soo ansixinta iyo soo gubinta oo gacanta loo geliyey MD waa fashil bilowgiisa oo noqon kara dagaal bilowgiis, waana baaba’ albaabkii laga gali lahaa.
Waa gar in Midowga murashixiinta oo inta badan goor dambe soo baraaruga ay hadda isku dayayaan inay la horqabateeyo wixii lala baxsaday, mana ah in loo daayo Rooble iyo DG haddii kale waxaa soo baxay barlaman iyo madaxdtooyo ehelo iyo qaraabo isu codeysay wada ah sidii K/Galbeed oo soo saartay Senetarro ka wada yimid guriga MW Cabdicasiis Laftagareen iyo kuwa Siciid Deni oo ay qoysaskooda u soo codeeyeen.
Gabagabada waxay tahay RW Rooble Ma is dhiibay oo waa laga guuleystay Misa waa Ka dhab oo sidaan ayuu dantiisa ka arkay?